wararka maanta-arlaadii.net » Weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay Xerada Ciidamada Somalida iyo mareekankaa Ee Sanguuni
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya deegaanka Baar-sanguuni ee duleedka magaalada Kismaayo, qarax Ismiidaamin ah ayaa galabta ka dhacay xerada Ciidanka Somalida iyo kuwa Mareykanka ay ku leeyihiin deegaankaasi.
Qaraxan ayaa waxaa fuliyay nin waxyaabaha qarxa isku soo xiray oo kaxeynayay gaari Caasi ah oo la soo miidaamiyay, wuxuuna ku qarxay afaafka hore ee xerada.
Saraakiil ka tirsan ciidanka ammaanka ayaa waxa ay Dhacdo.com u xaqiijiyeen in gaariga qaraxa siday kahor inta uusan qarxin la rasaaseeyay, lugahana laga banjariyay, taasi oo qasabtay inuu ku hor qarxo irida hore ee xerada.
Sidoo kale saraakiisha ayaa waxa ay inoo sheegeen khasaaraha qaraxan ka dhashay inuu ku kooban yahay oo keliya ninkii gaariga kaxeynayay oo ku geeryooday, balse aanay jirin khasaare ciidanka ka soo gaaray qaraxan.
Shalay gelinkii dambe ayay aheyd markii xeradaasi ay weerareen ururka Al-shabaab, waxaana khasaare ka soo gaaray ciidanka Somalida iyo kuwa Mareykanka, weerarkaasi Mareykanka waxaa looga dilay Hal askari, halka afar kalena looga dhaawacay.
Shabaab ayaa kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan Magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka tan iyo markii la guda galay bisha barakeysan ee Ramadaan.